विपदबाट जोगिन सिकाउँदै नेपाली सेना – onlinekantipur.com
पछिल्लो समयमा विपदबाट जोगिनको लागि नेपाली सेनाले समुदायस्तरमै सचेतना फैलाउन थालेको छ। सेनाले प्रदर्शनी गरेर,प्रशिक्षण दिएर र समुदायसंग भेटघाट गरेर विपदबाट जोगिनको लागि अपनाउनु पर्ने विषयका
गणपति थापाले भने,‘पछिल्लो समय विपदका घटना बढिरहेका छन्। भुकम्पको जोखिम पनि निकै छ। कोभिड महामारीले उग्ररुप लिदैछ। शव व्यवस्थापन चुनौति बनेको छ। यी सबैको विषयमा समुदायमा जानकारी दिन सेना क्रियाशिल बनेको छ।’
कोरोना महामारीका कारण सरकारले २५ जना भन्दा बढि भेला नहुने आचारसंहिता बनाएको छ। त्यही अनुसार समुदायका अगुवालाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका विषयमा समेत अभिमुखिकरण गरिएको छ। गणपति थापाले भने,‘विपद कसैलाई सोधेर,समन्वय,सहकार्य गरेर आउँदैन। त्यसको लागि आफैँले पुर्वतयारीका क्रियाकलाप अपनाउनु पर्छ। विपद जोखिम न्युनिकरण गर्न नेपाली सेना अग्रपंक्तीमै रहेर काम गरिरहेको छ। यो कार्यले नागरिक सैनिक सम्बन्धलाई प्रगाड बनाएको छ।’
यो वर्षको नियमित कार्यक्रम अन्र्तगत आइतबार नेपाली सेनाले सामुदायिक विपद प्रतिकार्य प्रदर्शनी २०७८ आयोजना गरेको छ। नन्दाबक्स गणको मैदानमा डेमोस्ट्रेसन गरेर विपद रोकथाम तथा नियन्त्रणका बिषयमा देखाइएको थियो। प्रदर्शनीमा कोभिड १९ बाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन, भुकम्प र आगोलागी हुदा संयुक्त सुरक्षा फौजले प्रदर्शनीमा देखाएको थियो। यो कार्यक्रमबाट २ सय ५० जना लाभान्वित भएका छन्।
यसअघि जुम्लाको तिला,हिमा,सिँजा,गुठिचौर र तातोपानीमा विपदको अभ्यास गरिसकेको छ। यो वर्ष चन्ददननाथ नगरपालिका,कनकासुन्दरी र पातारासी गाउँपालिकामा गर्दैछ। गाउँमा हुने अभ्यासमा शिक्षक,विद्यार्थी,युवा लगायतका सबै समुदाय सहभागि हुने गरेका छन्। उनीहरुले बाढी,पहिरो, आगलागी लगायतका विपदबाट जोगिनको लागि गर्न सकिने सबैप्रकारका अभ्यास सेनाले सिकाउँछ।
अहिलेसम्म कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनका बारेमा समुदायमा अन्यौल थियो। सेनाले कसरी शवको व्यवस्थापन गर्छ। अस्पतालबाट कसरी लैजान्छ? शव व्यवस्पन गर्न आफन्त संगको समन्वय कसरी हुन्छ? भन्ने बारेमा अन्यौलता थियो। गणपति थापाले भने,‘यी सबै विषयमा व्यवहारीक रुपमै अभ्यास गरेर जानकारी दिने काम भयो।’ कोभिड १० रोकथाम तथा नियन्त्रण र शव व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी दिइयो।
नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्तरुपमा डेमोस्ट्रेसन देखाएका हुन्। पहिले व्यापक मास जम्मा गरेर अभ्यास गर्ने भनिएको थियो। सबैलाई सचेत पार्ने लक्ष्य थियो। गणपति थापाले भने,‘कोभिड महामारीको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै सेम्बोलिक रुपमा देखाइयो। कोभिड रोकिएपछि उपयुक्त ठाउँ छनौट गरेर अभ्यास गर्नेछौँ। त्यो अभ्यासले यहाँका समुदायमा सचेतना फैलाउने निश्चित छ।’
प्रदर्शनीमा विपदका क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संघ संस्थालाई समेत बोलाइएको थियो। विपदमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति,औजार उपकरण,सवारीसाधन र विपद आइपरेको खण्डमा अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा देखाइएको थियो। पछिल्लो समयमा नेपाली सेनाले जनतासंगै रहेर काम गरेपछि नागरिक सैनिक सम्बन्ध निकै मजबुद बनेको छ। कुनै पनि विपद् पर्दा पहिलो फोन नेपाली सेनालाई नै गर्न थालेका छन्। प्रदर्शनीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजयाकुमारी प्रसाई लगायतका सरोकारवाला निकायाको सहभागिता थियो।
लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको सुखद अन्त्य